Art - The unCommission
Kuunza nyaya + njere kuhupenyu
Art yakaunza mufaro, kurudziro, uye kubatana kune unCommission process, kugadzira mamiriro ekunzwisisa kwakagovana nenzira iyo art inogona chete.
Art kubva kumuimbi wedu wekugara, Play Steinberg, inobatsira kuita chirevo chezvese zvakagovanwa nevatauri vedu. Pamusoro pezvo, art kubva kunharaunda-yakavakirwa masangano ehunyanzvi munyika yose inoongorora Dingindira rekuve muSTEM, nevechidiki vachigovana zvavakasangana nazvo kuburikidza nehunyanzvi uye nekupa izvo ndezvechokwadi kwavari nenharaunda dzavanogara.
Mifananidzo iri pamusoro yakaitwa nePlay Steinberg inoratidza makotesheni kubva kuvatauri vengano vana: Kendra Hale, Kaitlyn Varela, Dorianis Perez, uye asingazivikanwe nyaya.
Unyanzvi huri pazasi hunoratidza dudziro, zvitendero, uye maonero evanyanzvi nenharaunda uye hazvifanirwe kutorwa semumiriri wemaonero eUnCommission kana 100Kin10.
Shanda kubva kune UnCommission's Resident Artist
Mugari muimbi Play Steinberg akaunza mazwi evatauri vedu hupenyu, achifema hupenyu mumadingindira atakanzwa kakawanda.
Illinois: Inzwi reKuve
Dai 9, 2022
MuI Illinois, vadzidzi vakagadzira hunyanzvi hwezwi hwakaongorora pfungwa yekuve muSTEAM.
North Carolina: Yedu STEM Nyaya
KuNorth Carolina, vadzidzi vakagadzira bhuku rine hunyanzvi hwekutaura kwemaonero avo paSTEM.
Humwe hunyanzvi hwakagadzirwa nevadzidzi huri kuuya munguva pfupi!